संस्कृति माेनिका देउपाला
पर्व बिक्रम राई
उद्योगी–व्यवसायीको लक्ष्मीपूजा, कसले कसरी गर्दैछन् ?
उद्योगी, व्यवसायीले समेत तिहारलाई विशेष रूपमा मनाउने गर्दछन्। खासगरी वर्षभरीको व्यापार, व्यवसाय राम्रो होस् भनेर कामना गर्ने र धनकी देवी भनिने लक्ष्मीको पूजाआजा गर्ने प्रचलन छ। यसवर्षको लक्ष्मीपूजा उद्योगी, व्यवसायीले कसरी गर्दैछन् ? हामीले केही उद्योगी, व्यवसायीलाई सोधेका छौंः
रथयात्रा प्रकरणमा कहाँ चुक्यो प्रशासन ? रातो मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रा प्रकरणलाई अति संवेदनशील सांस्कृतिक कर्म नभई जातीय द्वेष र घृणा फैलाउने तत्वका रूपमा जसरी परिभाषित गरियो, त्यसले समुदायबीच आपसी समझ अझ बढाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।